Posted by ကလိုစေးထူး at 10:14 PM
Aug 24, 2007, 3:47:00 AM
ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ခေါင်းညိမ့်မိပါတယ်။ ကော်မန့်ကိုဖတ်ပြီး ခေါင်းခါပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်...
Aug 24, 2007, 8:01:00 AM
So sorry for it.I think they don't have intelligent in order to know truth.So i am ashamed of it.I am reading your blog all most every day and most of the points you posted hold my heart and soul.
Aug 24, 2007, 8:49:00 AM
you should be ashamed yourself that you told this kind of words. Everybody know what kind of Tatmadaw is this, you are the one who doesn't know. Please open your eye properly. Don't need to compare this tatmadaw with General Aung San Tatmadaw.
Aug 24, 2007, 9:59:00 AM
ကို anonymous ပြောတာ တစ်ခုတော့ မှန်တယ်၊ ကိုလေ ဆိုတာ၊ လေ...လေလား မောင်ရို့ ဆိုတာလေ၊ အမြင်မှန်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
Aug 24, 2007, 10:02:00 AM
To Cadets form Russia
You have been brain washed by selfseeker Than Shwe.
Everything is essential for any purpose.
For example:Salt is important for cook the dish but if you putalot it can be destroyed the taste.
So you should have to be awared of your position.
Do you aware that Selfseeker Than Shwe is leading Burma to Second North Korea.
PS. Ko Kalo SeHtoo,Could you give me the URL of Russia Blogger.Thanks.
ko moe ko lay ? ko may ko @#$ . lol
Aug 24, 2007, 4:37:00 PM
To burmese solider whoever
when Gen. aung sun and his commareds fought to colonail and facsits with polictians . not only soilders .
2. IN march 3, 1962 Gen. nay win overthrew to paliamentary government.
1988 as u know ' maybe not .Gen.soe mg lead the election 1990. Nld win 82%. of election result . but today, regime Than shwe refused . addton, regime forced NLd member resign form party membership, put them jail etc.
may30, 2003,Gen. Soe win led to kill daw su and his supportors.
i want to say to u . "army is only defent to the country and citizin's lives. NOT TO CRAZAY IN POWER . IF ARMY MAN NEED TO POWER, leave the army . then form party as other people ,then campain in the coutry. if peopel like ur party .they will vote to u . if u dont' win this time . maybe next time.
but today, ur senior.gen than shwe force to draw consitution 25 % from army at lot taw automaticly WTHOUT CAMPAIGN.
Aug 25, 2007, 12:00:00 AM
ဘာတွေလာရေးနေတာလဲ။ ယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးလား။ တော်တော်ပဲ ကိုမိုးကိုလေကို အားကိုးချင်တယ်ထင်တယ်။ အေး .. ကျပ်ကျပ်အားကိုး...နောက်ဆုံးအဆင့် မင်းတို့အမေတွေ၊အမတွေ၊နှမတွေပါ အားကိုးစာရင်းထဲသွင်းပေးလိုက်..ကြားလား။ မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုးအနက်ဆုံးငရဲချောက်ထဲကျနေတာရော...မင်းသိလား။ မင်း..ဘယ်လိ်ုကောင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်...ဂရုမစိုက်ဘူး..။ သိလဲမသိချင်ဘူး။ လူ့စည်းကမ်းဆိုတာကို နားလည်ရတယ်...။ လက်တစ်ဆုပ်စာလူတွေ ကောင်းစားပြီး...ပြည်သူတွေတစ်ရပ်လုံး အငတ်ဘေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာရော...မင်းသိလား။
မင်းအားကိုးတဲ့ တပ်မတော်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာက မြန်မာနိုင်ငံကို အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာကိုကောမင်းသိသလား....
မင်းမသိရင် အငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေကိုမင်းလိုက်ကြည့်လိုက်အုံး.....မင်းအားကိုးတဲ့တပ်မတော်က
Aug 25, 2007, 5:20:00 AM
စိတ်သက်သာရာ ရတာက အဲဒီ ဘလော့မှာ ကျနော်တို့ လေးစားရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စော်ကားထားတဲ့ ပို့စ်ကို ပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်ပါပြီ ဘာပဲပြောပြော အဲဒီအတွက် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။
ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျနော် လင့်ခ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ http://oppositeye.blogspot.com/
Aug 25, 2007, 8:00:00 AM
ကျွန်တော် ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အားလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းပြီး ရမ်းတတ်တဲ့ အကျင့် ကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဆွေးနွေးချင်ရင် ဂျီတော့ ကိုလာခဲ့ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်သူ့ကို မဆို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်လို လေးလေးစားစား ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
လူတိုင်း ဟာ ခံယူချက်ချင်း မတူနိုင်သလို လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်လည်း ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဝေဖန် ပုတ်ခတ်မှုတွေ လုပ်နေကြတဲ့ ဘယ်ဘက် ကို မဆို ကျွန်တော် အထင်သေး ရှုတ်ချပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ မြန်မာများ ဖြစ်ကြတယ်လို့ လက်ခံထားလို့ပါ။ မြန်မာဆို တဲ့ သွေး တစ်မျိုးတည်း စီးဆင်းနေတဲ့ လူတွေ ချည်းပါပဲ။
ပြသနာတစ်ခုကို အဖြေရှာတာနဲ့ အပြစ်ရှာတာ ပုတ်ခတ်တာ မတူပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ဆွေးနွေးတာနဲ့ ဆဲဆိုတာ မတူနိုင်ပါဘူး။
ရှေ့တန်းမှာ ကျည်ဆံတွေကို ပန်းလို သဘောထားပြီး ဘာအခွင့်အရေး မှ မမျှော်ကိုးပဲ အသက်စွန့်နေတဲ့သူတွေ ၊ စွန့်ပြီးသားလူတွေ ၊ အဲလို စွန့်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ သူတွေ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ထင်ပါသလဲ။
အဲလိုလူမျိုးတွေ ဘယ်လိုနေပြီး ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာပဲ နေနေကြတဲ့ ညီအကိုတို့ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ဘူးပါရဲ့လားခင်ဗျာ။
အများစုမြင်ဘူးတာက မြို့ကြီးတစ်ချို့ပေါ်က တစ်ချို့သောသူတွေကိုပါ။
ဘယ်နေရာမှာ မဆို ဆိုးတဲ့လူရှိတာပဲ။ ကောင်းတဲ့လူလဲရှိမှာပဲ။
တကယ် အနစ်နာခံပြီး လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို မမြင်ဘူးတိုင်း ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းပြီး မစော်ကားပါနဲ့ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အမှားလုပ်တဲ့ လူရှိရင် အဲဒီလူကို နာမည်တပ်ပြီး ကြိုက်သလို ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဆဲ ချင်လည်းဆဲနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးကို သိမ်းကြုံးပြီး မစဉ်းစားပဲ ပြောနေကြရင်တော့ အတွေးအခေါ်မရှိဘူးလို့ပဲ လက်ခံပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ကျွန်တော့် ဂျီတော့ က aungwin.htut@gmail.com ပါ။
မျက်နှာဖုံးတွေ မပါပဲ မိတ်ဆွေလိုလာရင် မည်သူမဆိုလာလို့ရပါတယ်။ အဲ... မျက်နှာမပြရဲရင်တော့ မလာခဲ့ပါနဲ့ အချိန်ကုန်လိုပါ။
Aug 31, 2007, 3:44:00 PM
Sep 1, 2007, 4:56:00 AM